February 26, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Shaqooyinka February 26, 2020
Country: Ethiopia Organization: Project Concern International Closing date: 31 Mar 2020 PCI seeks an Associate Technical Advisor (ATA) to lead the provision of technical assistance and oversee program quality for the WE program in the Africa region by providing strategic direction and support for program management and MERL (monitoring, evaluation, research and learning) Sii akhriso
Ethiopia News February 26, 2020
Ethiopian Cardinal Berhaneyesus Demerew barred from entering Eritrea BBC NewsSii akhriso
Cayaaraha February 26, 2020
(France) 27 Feb 2020. Lyon ayaa guul kaga gaartay kooxda Juventus Groupama Stadium kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-0. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Lyon. Daqiiqadii 31-aad kooxda Lyon ayaa hoggaanka u qabatay […]Sii akhriso
(Madrid) 27 Feb 2020. Manchester City ayaa guul soo laabasho ah ka soo gaartay Real Madrid kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood waxay sameeyeen qaab […]Sii akhriso
(France) 26 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Lyon ayaa naadiga Juventus ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Groupama kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Lyon iyo Juventus. Haddaba halkaan hoose ka eeg safafka labada kooxood oo dhammaystiran:- […]Sii akhriso
(Madrid) 26 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa naadiga Manchester City ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Santiago Bernabeu kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League. Waxaa la shaaciyey haatan safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan ee kooxaha Real Madrid iyo Man City. Haddaba halkaan hoose ka eeg […]Sii akhriso
(Yurub) 26 Feb 2020. Tababarihii hore kooxda Real Madrid ayaa ammaanay macallinka reer Jarmal ee haatan leyliya naadiga Liverpool ee Jürgen Klopp. Tababaraha reer Argentina ee Santiago Solari ayaa ka hadlay dhowr arrimood ee quseeya kubadda cagta xilligan la joogo, wuxuuna si gaar ah kaga hadlay kooxda Liverpool uu hoggaaminayo Jürgen Klopp. Santiago Solari ayaa wareysi Sii akhriso
(Yurub) 26 Feb 2020. Xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Willian ayaa wuxuu cadeeyay inay suurtogal tahay inuu ka tago kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan inkasta oo ay wadahadaladu wali socdaan. Kooxda Chelsea ayaa u soo bandhigtay 31 jirkan reer Brazil heshiis uu ku kordhinayo qandaraaskiisa Blues labo sano kale, laakiin saxaafadda Ingiriiska ayaa xaqiijineysa in Sii akhriso
(Yurub) 26 Feb 2020. Macalinkii hore kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arsene Wenger ayaa ka hadlayay guuldarradii xalay Chelsea ka soo gaartay naadiga reer Germany ee Bayern Munich. Bayern Munich ayaa garoonka Stamford Bridge guul kaga soo gaartay kooxda Chelsea kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-3. Arsene […]Sii akhriso
Soomaaliya February 26, 2020
Muqdisho (SONNA)- Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa tababar u soo xiray Guddoomiye ku-xigeennada Amniga iyo Siyaasadda ee degmooyinka Gobolka Banaadir iyo qaar ka tirsan Agaasimayasha qaybta Amniga iyo Arimaha Bulshada. Tababarkan oo muddo labo cisho ah socday laguna qabtay aqalka dowlada hoose ee Sii akhriso